रेलदेखि जेलसम्म, यतिदेखि पप्पुसम्म : के मात्रै हेर्ने पर्यटकले ! | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
रेलदेखि जेलसम्म, यतिदेखि पप्पुसम्म : के मात्रै हेर्ने पर्यटकले !
पुस १९, २०७६ शनिबार ९:४२:४३ | मिलन तिमिल्सिना
सगरमाथा, लुम्बिनी, गैंडा, हात्ती, बाघ । हिमाल, पहाड, तराई । थरीथरीका संस्कृति रीतिरिवाज र जैविक विविधता । अन्त देख्न नपाइने यी सबै कुरा नेपालमा देख्न पाइन्छ भन्ने त सबै विदेशी पर्यटकलाई थाहा छ । तर नेपाल भ्रमण वर्षमा यसबाहेक नयाँ कुरा के होला ? सबैलाई चासो र खुल्दुली छ ।
पर्यटकलाई पुराना कुराले मात्रै चित्त बुझ्दैन, धित मर्दैन । नयाँ नयाँ कुरा पनि देखाउनुपर्‍याे । तामझामका साथ सुरु भएको नेपाल भ्रमण वर्षलाई लक्षित गरेर सरकार र दलहरुले यस्तै नयाँ नयाँ कुरा ठिक पारेका छन् पर्यटकलाई देखाउन ।
सबैभन्दा ठूलो त नेपालमा कुरैकुरा छ । सबै कुरा एक ठाउँमा थुपार्ने हो भने सगरमाथा भन्दा अग्लो हुन्छ । हजार जिब्रा भएको शेषनागले समेत बयान गरेर साध्ये नलाग्ने कुरा । कुरा अर्थात गफ । प्रधानमन्त्रीका कुरा र सपना, मन्त्री र अरु नेताहरुका भाषण र गफ । कति छन् कति !
कुरा, गफ, भाषण, सपनालाई मान्ने हो भने नेपालमा रेल चल्न थालिसक्यो । पानीजहाजमा मालसामान ओसारपसार सुरु भैसक्यो । उहिल्यै प्रधानमन्त्रीले पानीजहाजको टिकट किनेर बस्नु भनेलगत्तै टिकट लिएर लाइनमा बसेका कतिको त अझै पालो आएको छैन । पर्खेर बसेका छन् ।
मोनोरेल, मेट्रोरेल कुन मात्रै चढ्नु ! बाटो उस्तै फराकिलो र चिल्लो । धुलो, धुवाँ र खाल्डाखुल्डी हेर्छु भन्दा पनि देख्न नपाइएला भन्ने डर । पानीजहाज र रेलको मात्रै के कुरा ? मेलम्चीको पानी छताछुल्ल भएर काठमाण्डौ नै डुबाउने हो कि भन्ने डर भैसक्यो । लुम्बिनी र निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनिसक्यो । कुरा र गफमै बनेका अरु कुरा अझ कति छन् कति ।
विकासका कुरा छोडेर राजनीतिको रमाइलो हेर्न खोज्ने पर्यटकका लागि पनि मनोरञ्जन गर्न मिल्ने थुप्रै कुरा छन् । हुँदाखाँदाका सभामुख जेलमा छन् ।
विकास र समृद्धि मात्रै हेर्न खोज्ने पर्यटकलाई सन् २०२० को जाबो ३६५ दिनले मात्रै पनि पुग्दैन । अझै समय थप्नुपर्ने देखिएको छ ।
विकासका कुरा छोडेर राजनीतिको रमाइलो हेर्न खोज्ने पर्यटकका लागि पनि मनोरञ्जन गर्न मिल्ने थुप्रै कुरा छन् । हुँदाखाँदाका सभामुख जेलमा छन् । उपसभामुखले भैपरिआउँदा सभामुखको काम गरिरहेकी छिन् । अर्का सभामुख खोज्ने लम्बेतान प्रक्रिया चलिरहेको छ । जेलमा रहेका सभामुख, काम चलाउ सभामुख र हुनै लागेका सभामुख । सभामुख नै तीनजना, कतिवटाको मात्रै मुख हेर्नु ।
नेपाल घुम्न आउने पर्यटकलाई मुख देखाउन नमिल्ने र मुख देखिनसकेका सभामुख मात्र होइन, पहिलेका एमाले र माओवादी पनि हेर्न मन लाग्ला । दुई पार्टी एक भएपछि पहिलेका एमाले र माओवादी देख्न नपाइने हो कि भन्ने चिन्ता होला । तर चिन्ता मान्नै पर्दैन । बालुवाटार, सिंहदरबार, बानेश्वर, धुम्बाराई, पेरिसडाँडादेखि गाउँपाखासम्म जताततै एमाले र माओवादी छन् । नेकपाभित्रै एमाले र माओवादी धित मरुञ्जेल हेर्न पाइन्छ ।
अनि कम्युनिष्ट पो धेरै छन् र धेरै हेर्न पाइन्छ, कांग्रेस त एउटै छ, एकछिन हेर्दैमा सकिएला भन्ने कतिलाई लागेको होला । तर धेरै कांग्रेस हेर्न चाहने पर्यटकलाई पनि त्यो सुविधा छ । देउवा कांग्रेस, पौडेल कांग्रेस, कोइराला कांग्रेस, सिटौला कांग्रेस....। जति पनि छन् ।
मधेसवादी र अरु दललाई पनि उसैगरी हेरेर रमाइलो मान्न सकिन्छ । एकटकले हेरिरहँदा सरकारमा, आँखा झिमिक्क गर्‍याे कि प्रतिपक्षमा । फेरि अर्कोपटक आँखा झिम्क्याउँदा सरकारमा । को कुनबेला सरकारमा र प्रतिपक्षमा हुन्छ छुट्याउनै गाह्रो । जादू हेरेजस्तो । मधेसवादी दलको रमाइलो पर्यटक आकर्षित गर्ने अर्को कुरा हो ।
सरकारले किसानलाई यतिसम्म राहत दिएको छ कि अब किसानले खेतबारीमा मात्रै काम गर्नु पर्दैन । बेलाबेला शहरको रमाइलो हेर्न आउन पाउँछन् ।
राजनीति र विकाससँगै किसान, मजदूरलाई पनि एकपटक हेर्ने पर्यटकको चाहना हुन सक्छ । किसानलाई भेट्न गाउँपाखा र खेतबारीमा पुग्नै पर्दैन । एकछिन माइतीघरमा बस्ने हो भने माइतीमा चेलीबेटी आएझैं कहिले किसान आउँछन्, कहिले मजदूर । कसैले उखु देखाउँछन्, कसैले मुख ।
सरकारले किसानलाई यतिसम्म राहत दिएको छ कि अब किसानले खेतबारीमा मात्रै काम गर्नु पर्दैन । बेलाबेला शहरको रमाइलो हेर्न आउन पाउँछन् । अहिले उखु किसान यसैगरी शहर आएका छन् । सरकार र चिनी उद्योगीले उनीहरुलाई काठमाण्डौको झिलिमिली हेर्ने अवसर दिएका हुन् । भ्रमण वर्षमा पर्यटक नेपाल आएजस्तै, किसान यसैगरी काठमाण्डौ आउँछन् । काठमाण्डौ आएका किसानलाई विदेशी पर्यटकले पनि प्रत्यक्ष देख्न पाउँछन् । अनि किसानले पनि पर्यटक भनेका यस्ता हुँदा रहेछन् भनेर हेर्न पाउँछन् । दोहोरो फाइदा ।
पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने यस्ता कुरा खोतल्दै जाने हो भने कति छन् कति । यति, नेपाल ट्रस्ट, गोकर्ण रिसोर्ट, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, वाइडबडी प्रकरण, निर्मला हत्याकाण्ड, ३३ किलो सुन काण्ड, पप्पु ठेकदार, घरबेटी ठेकदार लगायतका चर्चित काण्ड, घटना र पात्र पर्यटकका लागि थप आकर्षण हुन् ।
नेपाल भ्रमण वर्ष सफल बनाउन सरकार, दल र नेताहरुले यस्तै अरु नयाँ गन्तव्य र कुराको खोजी गरिरहेका होलान् भन्ने आशा गरौं ।
अन्तिम अपडेट: चैत २, २०७६
ओम्नी जेभीसँगको साढे ३ अर्बको आईटी ल्याबको ठेक्का अब के हुन्छ ?
बुधबारसम्म १ हजार १ सय ४५ जनाको कोरोना परीक्षण
सरकारी कोषमा आयल निगमको ५० करोड रुपैयाँ सहयोग
परदेशमा समस्यामा पर्नेलाई सहयोग गर्न एनआरएनएकाे विज्ञ सहितकाे...
अत्यावश्यक सामाग्री लिन चीन गयो वाइडबडी
खाडीका देश र मलेसियामा समस्या पर्दा थाहा पाउनुपर्ने जानकारी
चितवनमा अत्यावश्यक पास बन्द
पोखरामा मोटरसाइकल नालीमा खस्दा एक जनाको ज्यान गयो
चट्याङ लागेर एक जनाको ज्यान गयो, तीन जना घाइते
महिला युरो कप एक वर्षपछि धकेलियो
पोर्चुगलबाट आएका धनकुटाका युवकको कोरोना परीक्षण रिपोर्ट 'नेग...
सबै किराना पसलमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य सूची राख्न ललितप...